07-28-2010 09:37 AM #41
Thanked 26,094 Times in 1,189 Posts
anmif0d Palua Beda uRef;
uRef;zDvm Gt swington uRef; aNrmufbufu aomifwef;&Snf
ukdarmfuif; tJ'DuRef;awGudk oGm;vnfvdk h&vm;As...
oGm;vdk h&&if &efukefuoGm;wmeJ h&aemif;uoGm;wm b,f[mydktqifaNyrvJrodbl; tudk...
aemuf pufwifbmvdk rdk;wGif;rSm oGm;vdk h&rvm;rodbl;tudk..
b,ftcsdefoGm;&wm tqifaNyqHk;vJ cifAs..
ckrSawG hrdvdk ht&rf;oGm;csifaew,f tudk..
BamarBlood, GeneralBoz, Ko Khant, mahawgani, Zeth
07-28-2010 02:56 PM #42
Thanked 826 Times in 125 Posts
Originally Posted by ChironBA
tJ'DuRef;awGudk oGm;vnfvdk h&vm;As...
uGsefawmfodwmav; 0ifajymvdkufOD;r,f/ tpfudk ub,fuaevmrSm vJAs/&efukefu qdk&if &efukef-aumhaomif; (odkY) &efukef-jrdwf av,mOf ? aumhaomif; (odkY) jrdwf rS pufavS eJY oGm;ekdifygw,f/aumhaomif;uae u&ol&d qdkwJh&Gm txd um;vrf;&Sdw,fAs/ tJ'Duae rS avSeJY oGm;wmydktqifajyavmufw,f/anmif0duGsef;? tJ'Duae 1 em&DavmufavSeJY qufoGm;&if qvHk&GmawG udk pkjyD;wnfxm;wJh rusKH*vuf&Gm ? tJ'Duae 45 rdepfavmufavSeJY qufoGm;&if pvuf*vuf
tJ'Duae3em&D avmuf avSeJY qufoGm;&if uGsef;rJMuD; awmfawmfvSwJY ae&mawGAs/ &aemif;uqdk&ifawmh &aemif;-aumhaomif; tJ'Duae qufjyD;oGm;edkifygw,f/
BamarBlood, ChironBA, GeneralBoz, mahawgani
07-28-2010 03:50 PM #43
Originally Posted by creative2020202020
tpfudk ub,fuaevmrSm vJAs
aumhaomif;uae u&ol&d qdkwJh&Gm txd um;vrf;&Sdw,fAs/ tJ'Duae rS avSeJY oGm;wmydktqifajyavmufw,f/anmif0duGsef;? tJ'Duae 1 em&DavmufavSeJY qufoGm;&if qvHk&GmawG udk pkjyD;wnfxm;wJh rusKH*vuf&Gm ? tJ'Duae 45 rdepfavmufavSeJY qufoGm;&if pvuf*vuf
aumhaomif;u 0ifNyD; aumhaomif;uae NyefxGufvdk h&&ifawmh &aemif;-aumhaomif;bufuyJ vmcsifw,fAs..
bmvdk hvJqdkawmh usaemfaewJhae&muae zl;cufudk av,Ofc aps;csdKw,fav...
tJ'Dbufudk oGm;&if udk,fh[mudk,f oGm;zdk hpDpOf&vm; 'grSr[kwf yHkrSef c&D;onfwifum; armfawmfbkwfwdk h&Sdvm;rodbl;..
aumhaomif;rSm c&D;oGm;vkyfief;&Sdvm; rodbl;As..
07-28-2010 04:48 PM #44
uGsefawmf tJ'Dbufudk a&mufcJhwm 2000 avmufwkef;u tpfudk &/ aumhaomif; rSm um;?qdkifu,f wufpDawG&Sdw,fAs/ c&D;oGm;vkyfief;awG tckawmh rodbl;?t&ifuawmh r&Sdbl;As/ armfawmfbkwfawGuawmh aygw,fAs/ig;zrf;avSi,f av;awGaygh / aumhaomif;rSmawmh ZdrfcHarmfawmfbkwfawG awmY&Sdw,f/
09-27-2010 08:06 AM #45
Originally Posted by shankalay2007
jrefrmEdkifiH&JU pdwf0ifpm; p&maumif;aom ae&mrsm; qdkvdkYa&;vdkufygOD;r,f....../ /
uRefawmfwdkYNrdKY ta&Sbuf ckpuf&HkawG aqmufaewJh awmxJrSmayghAsm...t&yftac:awmh
,rf;wGif; qdkwm&Sdygw,f...tJ'D,rf;wGif; xJudk rD;jcpfqHeJY rD&IdUNyD;awmh xnfh,if
rD;xawmufw,fvdkYod&ygw,f....t,ifuawmh uRefawmfwdkY&Gmu vlBuD;awG
0g;ckwf?rId&Sm?"g;aoG;ausmuf&SmoGm;&if awGbl;cJhwmud ajymjyvkdYod&wmyg.../
uRefawmfvnf;pdwf0ifpm;vdkY oGm;Munhfjcifayr,fh ckawmh tJ'DawmwefBuD;udk ppfwyfu
puf&HkpDrHudef;awG pwifuwnf;u t&yfom;awG rnfonftaMumifESifhrQ 0ifcGifray;vdkY
usaemfaewJh jrdKYu bmjrdKYrSef;rod? b,fu qdkwm a&;rxm;awmh OmPfprf; ykwfpm tMuD;pm;xJ tao;av; xyfxnfhxm;wm MumaewmbJ/ b,fvdkrS tajz&Smvdk r&jzpfaejyD/
GeneralBoz, Grace, justkidding
10-19-2010 08:30 AM #46
Junior Cupid playboy.mmcp@gmail.com
Thanked 3,799 Times in 185 Posts
အပူချိန် 130 c ရှိမရှိတော.မသိ ဘူး သေချာတာ ကတော . သာမန်ပူရေဆူမှတ် ၁၀၀ ထက်ပိုပူတာက တော.သေချာပါတယ် အဲနေရာကိုကျနော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးသေချာလေ.လာဖူးပါတယ်၊ အဲဒီရေပူစမ်းက ကျောက်တောင်တွေကြားက ထွက်လာတဲ.ရေပူစမ်းပါ ။ ကြက်ဥစမ်းပြီးပြုတ်ကြည်.တော. ခဏလေးနဲ.စစ်သွားတာကို ထူဆန်းစွာတွေ.ရတယ်။မိုးတွင်တောင်မှ အဲရေပူစမ်းက ပူနေတယ် . ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ အဲနေရာကိုလေ.လာပြီးပါပြီ အန်ဒရယ်ရှိတယ် ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်လို.ပြောနေကြပါတယ် ဘန်းကျော်က ညီအစ်ကိုများ သွားပြီးလေ.လာချင်တော. ရန်ကုန် -မြိတ် ကိုသွားတဲ.ကားစီးသွားပါ ထားဝယ် ကိုကျော်ပြီးတာ နဲ. ပဲဒက်ကျေးရွာ ကိုရောက်ရင် ရေပူစမ်းသို. ၇ မိုင်ခန်. အထဲသို. ဆိုင်ကယ် taxi ငှားပြီသွားလို.ရတယ်
Arfyanquee, GeneralBoz, Grace, HtatePyaung, justkidding, Ko Khant, mokenlay, nijinsky, RunAtServer, shinyehtoot, ZuKa
12-11-2010 02:17 AM #47
aumhaomif;udka&mufatmifvmcJhyg/ 'DvdkuRef;awGudkywfMunfUvdkU&wJh avS awGiSg;vdkU&ygw,f/aps;awmhMuD;r,f/
မြန်မာပြည်သားတွေ ပါ့စပို့နဲ့ အဲလိုဝင်လို့မရပါ။လာချင်ရင်ရန်ကုန်ကနေဘဲလာလို့ရ ပါ့မယ်။
kosatsu, mrlynn, RunAtServer, TUN2N
06-17-2011 07:21 AM #48
“ချင်းတောင်တန်း ပေါ်က အသည်းပုံ ရိဒ် ရေကန်
ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဖလမ်းမြို့တွင်တည်ရှိသည့် ရိဒ်ရေကန်သည်ပင်လယ်ရေ
မျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း ၂၉၆၆ပေ အမြင့်တွင် ထူးခြားစွာဖြစ်ပေါ်နေသော ရေကန်ကြီးဖြစ်ပြီး ၃မိုင်ပတ်
လည်ကျယ်ဝန်းကာ၊ ၆၀အနက်ရှိသည်ဟုသိရှိရသည်။ ကန်၏ထူးခြားမှုမှာ သဘာဝအသည်းနှလုံးပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကန်ပတ်လည်တွင်ဒေသခံတို့က၀ိညာဉ်ခြံစည်းရိုးပင် ဟုခေါ်ဆိုကြသည့် မိုးမခပင်များ ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
“ရေကန်ဖြစ်ပေါ် လာပုံက ဒဏ္ဍာရီတော့ဆန်တာပေါ့နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက ခုဖလမ်းမြို့အနီးမှာ “ဘေးဗွီးမြို့” ရှိခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။ ဘေးဗွီးဘုရင်နဲ့မိဖုရား ကို ၀ိညာဉ်စောင့်နတ်သမီးက “ငါသည်သင်တို့၏ ၀ိညာဉ်စောင့်နတ်ဖြစ်ပြီး၊ နာမည်က ရိဒ် RIH လို့ခေါ်တယ်။ ခုသင်တို့နေထိုင် တဲ့မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်အရပ်မှာ
နေရာတစ်ခုရှိရာကိုနွားဖြူအသွင်ဆောင်ကာ ကောင်းကင်ခရီးဖြင့်ပျံသန်းခဲ့တော့ ကျင်ငယ်ရေတွေပန်းထွက်နေတဲ့ ရေအိုင်ကြီးတစ်အိုင်အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီရေအိုင် ထဲမှာ ခံစားနေရတဲ့ဝိညာဉ်စောင့်အဖြစ်လည်းကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဒေသက သေဆုံးသူအားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်တွေ ငါ့ထံလာရောက်ကြရမယ်”
လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့တယ် လို့အယူရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးဒေသခံတိုင်းရင်းတွေသေဆုံးတဲ့အခါလူသေ တယ်လို့ မသုံးနှုန်းတော့ဘဲ ရိဒ်ရေကန်ဆီသွားရောက်တယ်လို့ ပြောဆိုလေ့ရှိကြတယ် ။တေးသီချင်း တွေလည်းစပ်ဆိုကြပါတယ်”
ဟုရိဒ်ရေကန်နှင့် ၂မိုင်အကွာတွင်ရှိသည့် ရိဒ်ခေါဒါရ်ရွာမှ အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာ ဦးငှားကာ ကပြောသည်။ Mandalay Times သို့ ဦးငှာကားက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် နှစ်တိုင်း သည်ရေကန်မှာ ၀ိညာဉ်ပူဇော်ပွဲ
တွေကျင်းပကြသည်။ မီဇီုရမ်ပြည်နယ်က အာသံမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ ဇီုမီးမျိုးနွယ်စုတွေလည်း နှစ် စဉ် လာရောက်ပူဇော်ကြတယ်။ ကန်ရဲ့ထူးခြားမှုက ကန်ထဲမှာ အမှိုက်သရိုက်လုံးဝမရှိဘူး။ ကြည်လင်နေတာအမြဲပဲ၊
မှန်သားပြင်လိုပေါ့နော်။ မိုးရွာတဲ့ရာသီလည်းရေက ဒီလောက်ဒီလောက်ပဲ။ နွေရာသီပူတဲ့အခါလည်းရေက ဒီလောက်ဒီလောက်ပဲ။ ရေလျှံတာရေနည်းတာလုံးဝမရှိဘူး။
ယခုအခါရိဒ်ရေကန်အတွင်း ကလေးမြို့က နှစ်၆၀ ကန်ထရိုက်ယူကာစပိဘုတ်များပြေးဆွဲ အပန်းဖြေခြင်း အစီအစဉ်ကို၂၀၀၇ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းက စ၍ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကလေး- တီးတိန်ရိဒ်ရေကန်သည် မိုင်၉၀ကွာဝေးကာနေ့ချင်းရောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
တီးတိန်မှ၁၄မိုင်ကွာဝေးသည့် လွိုင်တွီးကျေးရွာသည် ၁၈၇၄ ခုနှစ်ကတည်းကတည်ခဲ့သော ရွာကြီးဖြစ်ကာ လားမြင်းကောင်ရေ ၅၀၀ကျော်ရှိသည့်ရွာကြီးဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၄၉၅၀ ပေမြင့်သောလွိုင်တွီးမှ၁၆မိုင်ကွာဝေးသည့် ရိဒ်ရေကန်သို့လားမြင်းများဖြင့်လည်း ဗဟုသုတအဖြစ်သွားရောက်နိုင်သည်။
ရိဒ်ရေကန်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်I.B RIMLAKE အဆောက်အဦနှင့်ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွင်တည်းခိုနိုင်သည်ဟုသိရှိရကြောင်း ၂၀၀၈ခုနှစ်မတ်လ၂၂ရက်နေ့ထုတ်မန္တလေးတိုင်း(မ်)ဂျာနယ် တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
abya, chitsu123, garfield4, GeneralBoz, Grace, happyvalley, JanJan, jokershan, justkidding, k-pooh, Ko Khant, koluchaw, maintmaintt, mgmgthan, MMDW, mokenlay, mrlynn, Ngwe Zinyaw, nnnaing, RunAtServer, sai naw, skyline2009, Thant Sin Htet, THIHA, Ye Win Soe, ye'thura, yokesoe, zero6
08-23-2011 08:32 PM #49
Originally Posted by cherishgirl
NrefrmEdkifiH&JY &Srf;&dk;r awmifwef;MuD;awGrSm &SdwJh awmeufwpfae&mrSm &SdwJh uefMuD;wpfuef teD;u ausmufaqmifawGudk &dkuful;xm;Ncif; Nzpfygw,f /
ae&mtwdtusudkawmh pHkprf;aeqJNzpfygw,f / 'DyHk[m &IaxmifhwpfckuaeNyD;
ausmufaqmifawGay:udk aea&mifNcnf usa&mufaewJhtcsdefrSm
&kduful;xm;wmNzpfygw,f / oifh&JY OD;acgif;udk b,frS nm ? nmrS b,fodkY
apmif;NyD;MunfhMunfhyg / bmxl;Ncm;ovJvdkY /
bmxl;Ncm;rIudk oifawGYygovJ /
tckyHkudk twnfhtwkdif; axmifMunfhvdkufyg /
tHhMozG,faumif;avmufatmifyJ bk&m;&Sdcdk;aewJh yHkav;xGufay:vmygw,f /obm0w&m;MuD;u tHMozG,f&maumif;ygw,f / 'g[m "gwfyHkynmeJY zefwD;xm;Ncif;r[kwfygbl; /
ax&0g' Ak'¨bm omEdkifiHrSm obm0ausmufaqmifawGrSmawmif bk&m; w&m;&JY
taiGYtoufawG udef;atmif; vdkYaeygw,f /
obm0w&m;udk av;pm; cspfcifNrwfEdk;yg / wefzdk;xm;yg /
rSwfcsuf / / ar;vfxJu taMumif;t&mudk NyefrSsa0wmyg/
tJvdk ar;vfxJ a&mufvmwJh yHkawGudk [kwfr[kwf odcsif&if google image search uae &SmMunfhvdkY &Edkifygw,fcifAsm;/
b,fvdk&SmvJqdkawmh yHkudk uGefjyLwmxJrSm save vkyfvdkufyg/ jyD;awmh google image search tay:vifhxJ u search box xJqGJxnfhvdkuf&if tajzay:vmygvdrfhr,fcifAsm/
usaemf &SmMunfhvdkufawmh7ckavmufay:vmygw,f/ tJ'DxJu wckudkawmh atmufrSm ay;xm;ygw,f/
GeneralBoz, Grace, Irrawaddy, JanJan, justkidding, k-pooh, koluchaw, maintmaintt, MaungHtwe, painpainlay, Peach, RunAtServer, solidsnake, THIHA
05-27-2013 01:49 PM #50
aejynfawmfrSm tckjzpfysufaewJh xl;qef;wJh qJGiiftm;awG taMumif;u awmfawmf vlajymrsm;vmwJh tjyif DVB u &kyfoHowif;rSmvnf; awGUEdkifygw,f/ tckrS owd&vdkU usL;ypfrSm usaemf t&ifu 2008 vydkif;rSm wifxm;cJhzl;wJh ydkUpfav;udk jyefukwfjyD; a&;vdkufwmyg/
azhbkwfu atmufyg vifhrSm 'DAGDbD&kyfoHowif;MunhfvdkUygw,f/ *Hk;qif;rSmawmif um;awG *D,mz&D;vfxm;&if aemufudk jyefqGJwwfoGm;ygowJh....
&SmazGjyD; um;vrf;twdkif;tay:rS qufvufarmif;ESif&m 4if;a'oausmfvGefoGm;rS qufoG,frSKtm;vHk;jyefvnf &&amp;SdaMumif;od&ygw,f/
Last edited by GeneralBoz; 05-27-2013 at 01:52 PM.
adaptor, Botazan, Grace, GreenHat, GuruAM, HlaingKaLayThin, Hollinaz, icy, jackknife, k-pooh, KaungKinPyar, KM Wai, kohtwe, kokoko123, KoSai11, Lynn Eainthu, maintmaintt, MATRIX, mgchatgyi, mgmgthan, MNO.BN, Nenemosha, nomoregirl, Nsaboy, nyanmoe, oowatoke, Poot, ThunderHawk, yokesoe, zero6